eNasha.com - डिस्कोले आज क्या भन्छ ?
डिस्कोले आज क्या भन्छ ?
जाम् त्यता जाम् जाम्
पुरानो भर्सनको गीत सुन्नुस्-
च्याङ्बा होई च्याङ्बा डम्फुले आज क्या भनछ ?
.... जाम् कता जाम् जाम्, कता जाम् जाम् ।
अब यसलाई सच्याएर यसरी पढ्नुस्-
सुन सुन है च्याङ्बा डिस्कोले आज क्या भनछ ?
.... जाम् उतै जाम् जाम् उतै जाम् जाम् जाम् जाम् ।
नेपालमा प्रथम पटक डीजेको वास्तविक अर्थ नेपाल भित्र्याउने व्यक्तिका रुपमा डिजे राजुलाई लिइन्छ । उनले आफ्नो डीजे अवधिको एक दशकमा नै धेरै परिवर्तनहरु देखिसकेका छन् । ५ अगस्त १९७४ मा काठमाडौँको ओम बहालमा जन्मिएका राजु अहिले नेपालका सबैभन्दा व्यस्त र महङ्गा डीजेका रुपमा चिनिन्छन् । खासगरी उनले च्याङ्बा हो च्याङ्बा गीतलाई डिजे मिक्स गरेर बजारमा ल्याएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो ।
सन् १९९४ देखि राजधानीको क्लब डाइनास्टीमा डिजेका रुपमा काम शुरु गरेका उनले १० वर्षभत्रै उनले ठूलो परिवर्तन देखेका छन् । कतिसम्म भने अहिले उनले डिजे पढाउने इन्स्टिच्यूटसमेत खोल्नु परेको छ । प्रायः चूपचाप सिर्जनामा व्यस्त हुन चाहने भए पनि व्यस्तताका कारण एल्बम निकाल्न नसकिरहेका उनको अर्को एल्बम बजारमा आउने तयारीमा छ । यो एल्बममा पनि उनले रिमिक्स गीतहरुलाई नै ध्यान दिएका छन् ।
आउनुहोस्, यिनै चर्चाका केन्द्रविन्दु डिजे राजुसँग आज कुराकानी गरौँ ।
आनन्दकुटीमा तपाइँ होस्टलमा बसेर स्कूले जीवन बिताउनु भयो, कसरी सम्झनुहुन्छ ती दिन ?
होस्टलको बसाई, केही रमाइलो केही झूर त भइहाल्छ । तर त्यहाँ सिनेमा, सङ्गीत र हुल्लडबाजका कारण ती दिनलाई रमाइलो भन्न सकिन्छ । यहाँ साथीहरुको सङ्गतका कारण संगीतको राम्रो संगत बन्यो, जसका कारण हामीले ब्याण्ड पनि बनायौँ र केही पर्फ पनि गर्यौँ ।
तपाइँ कस्तो बालक हुनुहुन्थ्यो ?
एउटा आम बालक थिएँ । खासै त्यस्तो बदमास पनि थिइनँ र निस्क्रिय पनि रहिनँ ।
तपाइँहरुले त सात कक्षा पढ्दै ब्याण्ड बनाउनु भएको थियो, त्यो ब्याण्डले पर्फम गर्नु भयो ?
अँ सात कक्षा पढ्दापढ्दै विदेशी गीतसङ्गीतको मोह बढ्यो । र, विदेशीहरुकै प्रभावका कारण हामी नजिकका साथीहरु मिलेर ब्याण्ड खोल्यौँ ।
फेरि दुइ वर्षको अन्तरालमा रथ चाइल्ड ब्याण्ड खडा गर्नुभयो किन ?
यो चाहिँ त्यतिबेलाको प्रख्यात मेटल ब्याण्ड आइरन मेडेनको प्रभावमा परेर खोलेका थियौँ । एउटा ज्यादै चलेको ब्याण्डले निकालेको गीतबाट प्रभावित भएर हामी साथीहरुले रथ चाइल्ड ब्याण्ड खडा गर्यौँ ।
त्यसबेला अंग्रेजी गीतको ज्यादै प्रभाव थियो होइन काठमाडौँबासी युवाहरुमा ?
अँ, हिन्दीको प्रभाव युवाहरुमा निकै कम थियो । नेपाली गीत गाउनु आफ्नै बेइज्जती गर्नुसरह थियो । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा युवाहरु अंग्रेजीतर्फनै ढल्केका थिए । हामी पनि त्यसबाट अछुतो थिएनौँ । अरु त अरु निमा रुम्बा, नवीन के. भट्टर्राईहरु रक ब्याण्डका लागि स्वर दिन्थे । ती अंग्रेजीमा नै गाउने गर्थे ।
तपाइँ त्यसपछि कमाउन भनेर जर्मनी जानुभयो, होइन ?
त्यसबेला जर्मनी जानका लागि कुनै पनि किसिमको भिसा चाहिँदैन थियो । साथीभाइहरु सबैको मत मिल्यो र हामी जर्मनी गयौँ ।
कति कमाउनु भयो ? कमाएको पैसा के गर्नुभयो ?
मेरो परिवार कस्तो भने, परिवारको एक्लो छोरा । जर्मनी जानुपर्ने आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले म त्यहाँ रातिराति ड्रम बजाउँथे । त्यत्तिको भरमा साताभरिका लागि खान प्रशस्त पुग्थ्यो । अरु साथीहरु चाहिँ काम गर्थे । बरु मैले हाम्रो समूहमा भएको एउटा जर्मन केटोसँग डिजे कसरी गर्ने भनेर सिकेँ । यो कालान्तरमा निकै काम लाग्यो । त, मैले त्यहाँ कमाइनँ, कमाएको चिज पनि केही सिक्न खर्च गरेँ ।
तपाइँले खोल्नु भएको रेष्टुराँमा लाइभ पर्फेन्स हुने पहिलो रेष्टुराँ मानिन्छ हो ?
सही कुरा हो । यहाँ हामी क्यासिनोहरुमा बजाउने हुनाले जर्मनीको कमाई उति आकर्ष थिएन भन्दा पनि हुन्छ । तर उता पनि राम्रै पैसा जम्मा भएकाले नेपालमै केही गरौँ भन्ने भावना पलायो । म चाहिँ देशमै फर्किन जोड दिन्थेँ किनभने म एक्लो छोरा भएकाले घरको लोग्नेमान्छे बाहिर बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता थियो । त्यसैले यहाँ आएर ग्राफिटी भन्ने रेष्टुराँ खोल्यौँ साथीभाइ मिलेर । तर खर्च ज्यादा र आम्दानी कमका कारण यो हामीले बन्द गर्नु पर्‍यो र साथीहरु जर्मनी गए ।
साथीहरु फेरि जर्मनी फर्केपछि तपाइँले के गर्नुभयो ?
मैले जर्मनीमा सिकेको कला यहाँ काम लाग्यो । क्लब डाइनास्टीमा मलाई कामको निम्तो आयो । म त्यहीँ व्यस्त हुन थालेँ ।
तपाइँले पहिलो पटक डीजे शब्द कहाँ सुन्नु भएको थियो ?
मैले जर्मनीमा हुँदा नै डिजे बारेका सुनेको थिएँ । त्यहाँ डिजेको जुन महत्व थियो, त्यसले मलाई निकै नै तान्यो ।
तपाइँले कति समय डीजे ट्रेनिङ लिनुभयो ?
त्यति धेरै समय त होइन, छ महिना मात्र हो । तर नेपालमा त्यहाँको छ महिने सिकाई निकै महत्वपर्ूण्ा साबित भयो ।
नेपालमा तपाइँले डीजे काम शुरु गर्दा यो पेशाप्रति मान्छेको सोचाई कस्तो थियो ?
डीजे भनेकै थाहा थिएन र यसलाई सजिलो कामका रुपमा हेरिन्थ्यो ।
सन् २००२ मा तपाइँ सर्वोत्कृष्ट डीजे हुनुभयो होइन ? कसरी भाग लिन पुग्नु भयो ?
अँ, डिजेहरुको प्रतिस्पर्धा हुने भयो । जसमा मलगायत अन्य २२ जना व्यक्तिहरु यसमा भाग लिएका थियौँ । मैले यो उपाधि हात पारेपछि चाहिँ मेरो दिन फिर्‍यो भन्नु पर्‍यो ।
तपाइँले तीन वर्षअघि डाइनास्टी छोडेर रक्समा डीजेइङ गर्न थाल्नु भयो तर एल्बम निकाल्ने कुरा चाहिँ कसरी शुरु भयो ?
डाइनास्टीमा भन्दा रक्समा राम्रो अवसर भएकाले त्यहाँ गएँ । रक्समा चाहिँ क्लास मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्थ्यो । त्यसैले डाइनास्टी र रक्सको तुलना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई रक्स नै मन परेको हो । रक्समा डीजेइङ के हो बुझ्ने मान्छेहरु आउँछन् । यस्तै बुझ्नेहरुको भीडमा अधिकांश व्यक्तिहरु मेरा साथी नै बने । लगभग ९५ प्रतिशतहरुको सुझाव रहृयो, एल्बम निकाल्ने । मलाई पनि लाग्यो, यो सही सुझाव हो भन्ने । त्यसपछि काम शुरु गरिहालेँ । तर मेरो व्यस्तता यस्तो रह्यो कि मैले नियमित रुपमा काम गर्न सकिनँ । म ढिला भएँ । तर जब एल्बम निस्कियो, हिट भयो ।
च्याङ्बाका कारण तपाइँ पनि चर्चामा आउनु भयो तर तपाइँमा सिर्जनशीलता नभएको आरोप लाग्यो नि ?
यो सही कुरा हो, च्याङ्बालगायतका गीतहरुमा दीपक वज्राचार्यजीले राम्रो एरेन्ज गर्नु भएको हो । तर र्सजक र एरेन्जरमा फरक हुन्छ भन्ने कुरा पत्रकारहरुले बुझेनन् । त्यसैले यो कुरा बजारमा हल्ला भएको हो ।
गायक दीपक वज्राचार्यले च्याङ्बाको सबै काम मैले गरेको, राजुले केही गरेको होइन भन्दा कस्तो लाग्यो ?
मलाई पत्रकारहरुको ज्ञानप्रति दया लाग्यो ।
नेपालमा डिस्कोका दर्शक या ग्राहक कति संख्यामा छन् ?
बढीमा दुइ हजार । किनभने त्यही जनसंख्या एउटा डिस्कोबाट अर्को डिस्को चहार्ने हुन् । त्यसैले डिस्कोप्रति अरु दर्शक तान्न जरुरी छ ।
तपाइँले डिजे भएरै कति देशको भ्रमण गर्नुभयो ?
मैले हंगकंग, भारतका दिल्ली, कलकत्ता, जर्मनी भ्रमण गरिसकेको छु र तिहारमा सिंगापुर जाने कुरा चलिरहेको छ, हेरौँ के हुन्छ ।
डिजेको कमाई सामान्यतया कति हुन्छ ?
त्यो पनि भन्नु पर्छ र ! स्तर हेरिकन यो निर्धारण हुन्छ । मैले अहिलेसम्म धेरैमा ९० हजार रुपियाँ एक रातको लिएको छु ।
डिजेको काम रातभरि हुँदा कहिलेकाहीँ श्रीमतीसँग झगडा पर्दैन ?
पर्दैन, किनभने मेरो कामको प्रकृति श्रीमतीलाई थाहा छ ।
अहिले दोस्रो एल्बमको तयारी भइरहेको छ, यस पटक खास के छ ?
यस पटक खास केही छैन, तपाइँले राम्रा रिमिक्स र मेरो सङ्गीतका असल गीत सुन्न पाउनु हुनेछ ।
तपाइँले त आफ्नै डीजे सिकाउने इन्स्टिच्यूट खोल्नु भा छ रे हो ?
अँ डिजे के हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन र यो एउटा आकर्ष पेशा पनि हो भन्ने बुझाउन विगत केही महिनादेखि मैले बुम इन्टरनेशनल खोलेको छु । यो निकै राम्रोसँग चलिरहेको छ ।
तपाइँले डिजेइङ गर्दा रमाइला घटना पनि घटेका रहेछन् होइन ? गायक ठानेछन् होइन ?
अँ राजधानीबाहिर जाँदा एक पटक बिराटनगरमा डिजेइङ गर्दा केही पाको उमेरका एक जनाले भन्नुभयो- 'खै तिमी कतिखेर गाउँछौ - त्रि्रो गीत सुनेर जाऊँ भनेको !' म त छक्क परेँ । केही व्यक्ति त्यस्ता पनि हुन्छन् । अनि कोही चाहिँ डिस्कोमा आफ्ना छोरा, नाति, नातिना लिएर पनि आउँछन् र मज्जाले नाच्छन् ।
तपाइँ त डिजाइनको काम पनि गर्नु हुन्छ होइन ? कसरी यति धेरै काम गर्न भ्याउनु हुन्छ ?
होइन, त्यो शोखको काम हो । मैले रामकृष्ण ढकालजीको एल्बमको कभर डिजाइन गरेँ, त्यसको राम्रो चर्चा भयो । त्यसपछि अन्य साथीहरुले पनि अनुरोध गरेका छन् तर नभ्याएका कारण अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छैन ।
नेपाली रिमिक्सको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
राम्रो छैन । किनभने यो एउटा हावा हो । हावा चलेको बेला पात हल्लिएको मात्र हो । वास्तविक गीत नै पछिसम्म रहिरहन्छन् । तर यदि पैसा कमिन्छ र वास्तविक गीत नमारी गर्दा हुने किसिमको काम चाहिँ जहिले गरे पनि हुन्छ ।
ट्रयाक बाहिर रिलिज सङ्गीतकार समुद्रपार लुकेका कुरा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड नेपाली तारा उपलब्धि प्रेम र विवाह भिडन्त विचार पेज थ्री रुचि गायिका गायक गीतकार कन्सर्ट